ISouthwind Dredging Little River nge-Ellicott Dredger
Izingxenye ze-DNREC ze-Watershed Stewardship neFish & Wildlife zimemezele izinhlelo zephrojekthi yokubambisana e-Little River ngaseDover, kusuka ebhulohweni i-Route 9 / Bayside Drive eLittle Creek empumalanga kuya eDelaware Bay.
Ukwehliswa kabusha kuhlelelwe ukuqala ngesonto lesibili lale nyanga. AbakwaSouthwind Construction base-Evansville, Ind., Banikezwe inkontileka yephrojekthi futhi bazosebenzisa i-14 XNUMX Ellicott yabo® I-Brand 970 dredge.
Isiteshi singamamitha ayi-12,400 ubude futhi sizodilizwa kububanzi bezinyawo ze-40 engxenyeni yomfula namamitha we-60 engxenyeni yeDelaware Bay, kanye nokufika kwamamitha angama-5 ngokwesilinganiso esiphansi. UMfula iLittle wagcina ukudilizwa umbuso yi-1981-1982.
Inzuzo yesibili yephrojekthi ukusetshenziswa okuzuzisayo kwezinto ezibunjiwe ukubuyisa nokukhulisa indawo yokuhlala izinyoni zamanzi ngaphakathi kwesigaba esiseduze seFish & Wildlife Little Creek Wildlife Area impoundment's Refuge cell, elinye lamaseli amaningi ahlanganisa ukuvalelwa okuhlukaniswe yimigwaqo ukuvumela ukuphathwa okuhlukile .
Izinto zokusebenziseka eziwusizo zizokhuphula ukuphakama okungaphansi kweseli lokuvalelwa kufinyelela ezingeni elikhuthaza indawo yokuhlala yamanzi nendawo yokuhlala yasendaweni engafaniyo nezinsizakusebenza zokudla, kususe ukuphakama okushisayo okuholele ekwakhiweni kwamanzi okuvulekile ngokweqile.
Iphrojekthi engu- $ 1.01 million ekhokhelwa nguhulumeni ifaka phakathi ukukhipha ama-cubic yards we-79,000 we-metic wesiteshi esiteshini, kanye nokususwa kwezindiza ezi-derelict ze-30 kanye nomkhumbi ongahlelanga emzileni wamanzi eduze kwaseLittle Creek.
Kuzobekwa ipayipi eceleni komgwaqo okhona eLittle Creek Wildlife Area ukuze kuphume imfucumfucu ephuma esiteshini somfula singene esitokisini se-Refuge impoundment cell.
Le phrojekthi kulindeleke ukuthi iphazamise ukuzingela kule ndawo. Ukuqedwa kweprojekthi kulindelwe ngo-Okthoba 1, ngaphambi kwesizini eliphakeme kakhulu lamanzi we-waterfowl